Inqaku leRedmi 7 lifikelela kwiiyunithi ezili-15 lezigidi ezithengisiweyo | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 7 lidlulile kwiiyunithi ezizigidi ezili-15 ezithengisiweyo
Oko yasungulwa kwimarike, Inqaku leRedmi 7 liye laba yenye yeemodeli ezaziwa kakhulu phakathi kuluhlu oluphakathi. Kungekudala izokwaziswa Sele idlulile iiyunithi ezizigidi ezi-4 ezithengisiweyo, njengoko besisele sazi. UXiaomi uyazi ukuba unempumelelo ezandleni zakhe, eziqinisekisiweyo ngoku ngamanani amatsha wentengiso yale fowuni.
UXiaomi ukutyhile oko Inqaku leRedmi 7 sele lifikelele kwiiyunithi ezili-15 zezigidi ezithengisiweyo kwihlabathi liphela kwiinguqulelo zabo. Yimodeli efanelekileyo kuluhlu oluphakathi, nolunye lwe elona xabiso lemali Yintoni esinokuyifumana. Ukuthengisa okufezekisiweyo kwiinyanga nje ezintandathu.
Kule meko, njengoko inkampani iqinisekisile, Imalunga nentengiso yeRedmi Qaphela 7 kunye neNqaku 7 Pro. Nangona inkampani ingakhange ichaze ukuba intengiso yahlulwe njani phakathi kweefowuni ezimbini ukuza kuthi ga ngoku. Kungekudala sinokufunda okungakumbi malunga nokuthengisa kuluhlu.
Nangona iyimodeli yesiqhelo ebinentengiso ephezulu ukusukela ekuqaleni. Ngokuqinisekileyo yeyona nto ithengisayo. Kwakhona, kufuneka siyikhumbule loo nto Inqaku le-7 Pro linokulinganiselwa okufumanekayo kumazwe aphesheya, ukususela kwiimarike ezinjengeSpain ayikaziswa kwaye ayizukwenzeka.
Akuthandabuzeki yenye yeefowuni eziphumeleleyo ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Kumanani entengiso esiwabonileyo kwezi nyanga, iRedmi Qaphela i7 iye yangena kwenye njengeyona fowuni ithengiswa kakhulu kulo nyaka. Ke inyani yokuba olu luhlu lufezekisa inani lokuthengisa kwiinyanga nje ezintandathu kwintengiso ziindaba ezimnandi.
UXiaomi uyazi ukuba luluhlu oludumileyo, Kungenxa yoko le nto bekhuphe iinguqulelo ezintsha zeRedmi Qaphela 7 kwiimarike ezinjengeIndiya, ngenjongo yokufumana ukonyuka kwintengiso yakho. Uluhlu olugcinwe kakuhle ngoku, ke kunokwenzeka ukuba ukuthengisa kuya kuba phezulu nangakumbi ukuphela konyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku leRedmi 7 lidlulile kwiiyunithi ezizigidi ezili-15 ezithengisiweyo
I-Pokémon GO ivelisa ingeniso engaphezulu kwi-Android kune-iOS
Imbonakalo yokujonga ngokufana kweHuawei MediaPad M6 ngoku ixhaswe zezonaapps ziphambili